"Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra."Titosy 2:11
Ahoana no fomba nipoirana teny milaza zavatra tsy azo tsapain-tanana, toy ny hoe fahasoavana?
Andriamanitra dia naneho ny fahasoavany tamin’ny alalan’ny Zanany, Izay nirahiny ho ety an-tany, ho eo anivon’ny olombelona. Jesosy Kristy, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia naka endrik’olombelona ary nampiseho ho hita maso ireo toetra fototra maha Andriamanitra an’Andriamanitra: “Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy” (Jaona 1:17). Ireo rehetra nanokatra ny masony sy nanongilana ny sofiny, dia afaka nahafantatra ny fahasoavan’Andriamanitra, tamin’ireo tenin’ny Tompo sy ireo asany.
Rehefa notoriana ny Filazantsara, ny “Vaovao mahafaly”, dia nipoitra ny fahasoavana, amin’ny maha hafatra vaovao azy, nanolotra fanafahana ho an’ny olona meloka. Izany hafatra izany dia tsy manambara hoe avelan’Andriamanitra handalo fotsiny ny zavatra sasantsasany, na «tsy mijery akaiky loatra» ny mikasika ny ota Izy. Izany dia tsy ho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay tsy azo sarahina amin’ny fahamarinana. Tsia, fa ao amin’ny Filazantsara, dia naseho koa ny fahamarinan’Andriamanitra: ny fanamarinana noho ny finoana, ny fahamarinana izay manamarina fa tsy manameloka, satria fantatry ny meloka fa efa nisy Iray nisolo toerana azy ireo, nizaka ny famaizana sahaza azy ireo (Romana 3:22-26). Io finoana io dia ny finoana an’i Jesosy Kristy, maty teo amin’ny hazofijaliana noho ny fahotantsika.
Ny fahasoavana mitondra famonjena, dia atolotra ny olona rehetra tsy an-kanavaka. Asaina hanararaotra izany avokoa ny tsirairay. Tsy zo izany, fa fanomezana maimaimpoana avy amin’Andriamanitra. Tena lafo ny sanda naloany, dia ny ain’ny Zanany Lahitokana.
Efa miseho eo amin’ny fiainanao ve ny fahasoavan’Andriamanitra?